Freddie Ljungberg Oo Ka Hadlay Haddii Uu Kabtanimada Ka Qaadayo Aubameyang & Mudada Uu Sii Ahaanayo Tababaraha KMG Ee Arsenal | Somali football world
Home SOOMAALI Freddie Ljungberg Oo Ka Hadlay Haddii Uu Kabtanimada Ka Qaadayo Aubameyang &...
Freddie Ljungberg Oo Ka Hadlay Haddii Uu Kabtanimada Ka Qaadayo Aubameyang & Mudada Uu Sii Ahaanayo Tababaraha KMG Ee Arsenal
Freddie Ljungberg ayaa sheegay inuusan garaneyn mudada uu sii ahaan doono tababaraha ku meel gaarka ah ee Arsenal isagoo kaliya isha ku haya kulanka soo socda ee berri.
Xiddigii hore ee khadka dhexe ayaa si ku meel gaar ah loogu dhiibay kooxda koowaad ka dib markii Unai Emery la ceyriyay subaxnimadii Jimcaha isagoo caawiye u ahaa tababaraha reer Spain.
Inkastoo Arsenal ay xiiseyneyso dhowr tababare oo u bedela Emery hadana waxa ay ka warqabaan inay ku adag tahay inay helaan tababarayaasha sida Nuno Espirito Santo iyo Brendan Rodgers iyadoo xilli ciyaareedka uu socdo.
Taasoo la micno ah inay jirto soo jeedin la xiriirta in Ljiunberg loo kordhin doono mudada uu sii ahaanayo tababaraha si uu u soo bandhigo haddii uu u qalmo shaqada waxayna u bilaabaneysaa kulanka berri ee Norwich City.
Laakiin isagoo u hadlayay Sky Spors, ninka reer Sweden ayaa la weydiiyay haddii loo sheegay waqtiga ay dhamaan doonto howshiisa ku meel gaarka ah. Waxa uu ku jawaabay: “La iima sheegin mudada ay howsheyda socon doonto.
“Waxay kaliya igu yiraahdeen, ‘Diirada saar ciyaarta xigta islamarkaana samee wixii aad awoodo, markaas ayaan arki doonaa.
‘Waxaan diirada saarayaa ciyaartoyda, kulanka berri, waxaana qabanayaa howsheyda ugu fiican.”
Markii la weydiiyay haddii uu doonayo inuu shaqada si joogta ah u la wareego, 42 jirkaan ayaa hadalkiisa raaciyay: “Aniga ahaan waxaa ii muhiimsan ciyaartoyda iyo kooxda, waxaan isku dayayaa inaan diirada saaro mustaqbalka, waxaan ciyaareynaa berri.
“Malaha kulamo kale ayaan hogaamin doonaa kooxda. Waana sida aan xaalada u eegayo. Wixii ka soo haray wax micno ah iima sameyneyso.”
Waxa uu sidoo kale ka gaabsaday haddii uu doonayo inuu noqdo tababare. “Mustaqbalka ayaan arki doonaa. Waqti xaadirkaan waxaan baranayaa shaqada.
“Waxaan isku dayayaa inaan nafteyda diyaariyo. Waa ii sharaf inay kooxda ku fekerto inaan diyaar u ahay inaan qaado mas’uuliyadaan weyn laakiin waqti xaadirkaan waxaan u wajahayaa kulanba kulanka ku xiga.”
Go’aan ay tahay inuu Ljunberg si degdeg ah u gaaro ayaa ah inuu magacaabo xiddiga kabtanka u noqonaya.
Granit Xhaka ayaa laga qaaday kabtanimada ka dib markii ay isku dhaceen taageerayaasha, waxaana tan iyo markaas xirnaa Pierre-Emerick Aubameyang.
Ljunberg ayaa soo jeediyay inuusan isaga magacaabi doonin kabtan cusub: “Iskuma dayayo inaan isbedelo waa weyn sameeyo.
“Waxyaabahaas sidoodii ayaan u dhaafayaa madaama si weyn looga hadlay haddii ay ahaan laheyd saxaafada iyo kooxda dhexdeedaba.
“Waxaan diirada saarayaa sida aan u ciyaari doono iyo waxa aan ku sameyn doono garoonka dhexdiisa.”
Markii la weydiiyay haddii Aubameyang uu xiran doono kabtanimada kulanka Norwich, waxa uu ku jawaabay: “Waxaad arki doonaa berri.”
Previous articleReal Madrid Oo Guul Muhiim Ah Kasoo Gaadhay Alaves, Hoggaanka La Liga Oo Ay Gacanta Ku Dhigeen & Natiijada Kulanka Barcelona Iyo Atletico Oo Laga War Sugi Doono.
Next articleLiverpool Oo Xiddig Dhawaan Kahor Yimid U Dooratay Bedelka Fabinho & Jacaylkii Uu Horeba Ugu Muujiyay Imaatinka Anfield.